Indima ye-geotechnologies ekwenziweni kwe-3D Cadastre-Geofumadas
NgoDisemba, 2018 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
NgoLwesine uNovemba 29, njengeGeofumadas kunye nabahlali be-297 sithatha inxaxheba kwi-webinar ekhuthazwa UNIGIS phantsi komxholo: "Indima ye-geotechnologies ekuhambiseni i-3D Cadastre»Ngu-Diego Erba, ochaze ubudlelwane obubalulekileyo phakathi kwe-geotechnologies kunye ne-3D cadastre. Inqaku lagutyungelwa nguLau, umdibaniselwano weGeofumadas, kunye naye emva kwemini esivavanye ukubonakala kwakhe, iziphumo kunye nokuphononongwa komxholo kuba i-UNIGIS Uliphoselele kulabo abayilahlekile.
Ukumamela u-Erba kufuna ingqondo evulekileyo ejonge kumbono wangoku ongxamisekileyo kumazwe ahambele phambili, kunye nombono wexesha eliphakathi kumazwe lawo esi sibhengezo seCadastre 2034 asibonisi uloyiko lwento enokwenziwa; kodwa kungenxa yentsingiselo kulawulo lotshintsho, ekuthathweni kwezigqibo nakwimpembelelo zoqoqosho kwimeko apho amatyala eziphumo kubemi aphezulu ngokubonelela ngeenkonzo ezingcono ezisekwe kwiinkcukacha zommandla. Umdibaniselwano wam, uLau ubenobungcali ekushwankatheleni umxholo weWebinar; Amagqabantshintshi am abonakala njengomhleli weGeofumadas.com emdaka.
I-webinar yaveliswa ngokusekelwe kumxholo wencwadi Iimpawu eziphambili ze-FIG 3D CadastresWaza waqala, njengoko modeling 3D unako ukuphucula umhlaba njengoko obandakanyeka revolution kwezobuchwepheshe olomeleleyo ebonelela ngamathuba ngamabala baqalise ubuchwepheshe ekhuthaza uphuhliso, konke oku ngaphandle kokutyeshela zonke iimpawu evela Idatha ye-2D (iimephu, iileta, izicwangciso).
U-Erba, wagxininisa ukuba iinkqubo zokuqokelela idatha kufuneka zenziwe lula ngokusetyenziswa kweprogram ekhululekile njengaye Scrappy, sisisicelo sesikhokelo esenziwe ukuba sibambe idatha kwaye le datha igcinwe kwiwebhu, ishiye bucala ukusebenzisa iphepha njengendlela yokuqokelela i-archaic.
Umceli mngeni omkhulu, kwabo bathatha izigqibo. Ewe kunjalo, ukusuka kwinqanaba lokufunda kunye nembono yindlela efanelekileyo. Nangona kunjalo, xa sibona amava afana ne-Multipurpose Catastro yaseColombia, apho iTrimble yeza neLand Folio kunye nePenMap, sifika kwisigqibo sokuba unxibelelwano kunye nombane ozinzileyo kwiindawo ezisemaphandleni useyingxaki ekude. Ukugcinwa kwewebhu kuya kuhlala kuluhlobo lwe-hybrid phakathi kokuvuna, ukuvumelanisa, kunye nephepha elithile.
Indlela kufuneka kuqwalaselwe kuthathelwa ingqalelo ukuba nangona iteknoloji sisese kwisigaba lenguqu phakathi umboniso 3D kunye nokusebenza 5D, izixeko ezikhulu e-Latin America zifuna ukuba basebenzise iindlela yehlabathi yokuqala, ziya kuba zizinto ezilungileyo kwindlela eya kwiidolophu ezihlakaniphile.
Kwakhona wabonisa ukuba sifanele siqale sicinge nge-3D imodeli, kungekhona ngenxa yokuguqulwa kwetheknoloji, kodwa nangenxa yezinto ezibonakalayo zendawo, kuba kunokwenzeka ukuba kulungelelaniso oluhle lwezakhiwo zendawo. Esebenzisa umzekelo, unga nomfanekiso indima yokubumba 3D ukuba isiganeko ezingalunganga ezifana neenyikima kwaye ukubala ukubana kwezakhiwo ngokunxulumene emhlabeni kunye ukubana umhlaba ngokubhekiselele kwizakhiwo.
Waphinda wabonisa izifundo zenzululwazi kuqhutywa ehlabathini lonke ukususela 2011 ukukhuthaza ukusetyenziswa yokubumba 3D localulo isithuba, ukongeza ngokucela abaphulaphuli ekuphuhliseni iiprojekthi eziphathelele kulo mba ingakumbi Latin America.
Ukuze siqonde iteknoloji esibandakanya modeling 3D, ngokutsho ilizwe, kuyimfuneko ukuba aphendule umbuzo indlela ipropati ibhaliswe ku 3D?, Esazi ukuba iyunithi enxulumene ekuqaleni ne ukusetyenziswa komhlaba yepholigoni njalo, ukuba ungakwazi ukubhalisa indawo inzuzo 3D ndisenantoni na ukuba abazange efunyenwe cadastre yemveli.
Ewe, kwimeko yokuqala, ukusebenzisa i-3D i-technologies ingasetyenziselwa ukulawula izikhala, oko kukuthi, ukwenza inkcazelo yobume babo, ivolumu kunye nendawo, kunye neentlobo zomhlaba apho zikhona khona.
Ukusebenzisa isekude mihla kunokwenzeka ukufaka imithamo eliphezulu data, kuquka ukuveliswa data, ezifana amanqaku ilifu okanye indawo ilifu, kubalulekile ekwakheni izinto 3D siqhube uphuhliso zolwazi lomhlaba.
I-Geomatics kumazwe asaphuhlayo kufuneka amkele iindlela ezinje ngezi, njengoko benditshilo ngasentla, zinombono kwaye azinakuguqulwa. Njengokuba ezi zinto zisenzeka, kubalulekile ukugxininisa kwiinkqubo; Kuba nangona izixhobo zokubamba zihambile, ukusebenza kwesoftware kulungiso lwazo, kunye nolawulo lwentengiselwano kunye nokuhamba ngokulandelelana kulwazi lwangaphambili kunqunyelwe. Ukuba ukwamkelwa komgangatho we-ISO-19152 kusengumceli mngeni onzima, phakathi kokuthoba imodeli yoluvo kwimodeli ebonakalayo, kunye neeklasikhi ze-topographic esekwe kwinqanaba njengeyunithi yokugcina imethadatha; Kuyacingelwa ukuba sifuna ukuya kwimodeli enamacala amathathu (hayi ngombono, okanye ukubamba, kodwa ngolawulo olulawulwayo).
Ndicinga ukuba ingxaki ayikho ekwamkeleni imibono emitsha. Onke amaziko anabasebenzi abakhethekileyo, ngakumbi kwindawo yohlalutyo lolwazi kunye nophuhliso lwetekhnoloji; kodwa ubunzima kukudibanisa iinkqubo zobufundisi ezingagxili kuphela kwisigaba sokufumana idatha, kodwa ezifuna ukwenziwa ngokusemthethweni kwale nyaniso intsha yedatha, imeko kunye neenqobo zokufaneleka zamanye amaziko aza kusebenzisa ulwazi, iindlela ukuhlaziya phantsi kolawulo lwentengiselwano, kunye nendlela yokufunda kwigophe labadlali abaza kuthatha inxaxheba ekunikezelweni kweenkonzo kubemi.
Abo kuthi bazalisekise iinkqubo ezihlanganisiweyo phakathi kweCadastre kunye neRegistry, bayazi ngomceli mngeni kulawulo olubandakanya ukubandakanya isiqinisekiso sobhaliso, ukujonga imephu kumbukeli wewebhu, engasenazo iindawo ezingabamelwane ezichazwe ngokubhaliweyo, njengoko zinjalo ebonakalayo kwinkcazo yobugcisa eguqukayo yemephu ye-cadastral kwaye, ekwabonisa izithintelo ezivela kwimimiselo yolawulo ekhethekileyo evela kumthetho wommandla. Ngoku khawufane ucinge ukuba endaweni yenqwelomoya ye-2D kuya kufuneka ubone imingxuma-ntathu enezakhiwo ezincibilikiweyo ngesiqingatha seenzame zeDrone2Map okanye iConferenceCapture.
Xa webinar wachukunyiswa ukuba phambi kokuxoxa ukuphunyezwa mapping 3D ehlabathini lonke, ukuba kuyimfuneko ukusebenzisa ubugcisa ezifanelekileyo ukwenza iimodeli lomfanekiso indawo, njengoko ezi geoid, njengoko ezi ziyafuneka ukuba ukwakha nokuxhasa imodeli eguqulelwe kwiimeko ezikhoyo. Ukwakhiwa kwalo mzekelo kumazwe amaninzi ngokuqinisekileyo akuyiyo, ingxaki enkulu xa ucinga ngolu hlobo lweempawu zemibala, eziphambili.
Inxalenye esemthethweni ayikwazi ukushiywa ngasecaleni, eyazi ukuba i-cadastre enjalo ibandakanya indawo engokwezomthetho nezomgangatho wendalo. Kuxhomekeka sikhokelo yomthetho enxulumene nomhlaba kwisixeko nganye, indlela apho izakheko kunye nezithuba zinyangwa imiselwa, yena kuxoxwa ityala Colombia-Brazil, apho kukho intengiso ilungelo izithuba zokwakha ukuba ningandakheli (indawo ebomvu) .
Ngoko ke yintoni ukusebenzisa 3D umhlaba, ngokunjalo data volume ekhoyo, kuya kuba luncedo into ebizwa kwisemina web njengokuba "iimeko sifana", oko kukuthi, ukusombulula iingxaki ezinxulumene kwizithintelo, ngegolide nkqo (nezakhiwo ezinxulumene) okanye izibonelelo (imibhobho, iintambo, imibhobho okanye imigudu).
Ukususela kwiindawo ezimbini:
Ukufunyanwa: oko kukuthi, yintoni ekhoyo, yintoni na, apho ibukeka ngayo.
Ukudala: dala idatha ngokusebenzisa ubuchwephesha obufana ne-BIM, kwaye uvelise imodeli ye-3D, eya kuthi iya kuhamba kwinkqubo yokunikezela eyenza into into ebonakala ngayo.
Kubuhlungu kangakanani ukugxininisa kwakhona; ayikupheli ukulawulwa kolawulo lomhlaba, kodwa kwinqanaba elongezelelweyo lokuhlaziywa kunye nokudibanisa iinkonzo kubadlali abaqhagamshelwe kwintambo yokuthengiselana.
Ngexesha lo mboniso, Erba wabonisa imizekelo yendlela baye basebenzisa imifanekiso 3D kwezakhiwo inkonzo ethile esisiseko, nto leyo ebonisa ukuba le mifuziselo zimele sisixhobo ukwenziwa kwezigqibo, ekubeni yinxalenye yento sikhona, oko kukuthi, ngcamango yokuba kukho, apho ikhona kunye nokuba kunjalo, le nto ingaba yindawo yokuqala yokumilisela esebenzisa lolu hlobo lwedatha ukukhusela nayiphi na into efanelekileyo okanye engafanelekanga.
Ingcamango yepalastral isiguqulelwe ukuba ingavumi, ukubandakanywa kwengcamango kuqala Voxel, into efana nomlingani wepikseli, kodwa kwizinto ze-3D, "yileyunithi encinane yokucwangcisa imatriki". Ingcamango ye-3D cadastre yezoqoqosho ikwaziswa kwakhona, apho i-virtual or Valuation Valuation, ebonisa ukufaniswa kunye nepropati efakwe kwisithuba esithile, ukucacisa iimpawu ezithile ngokubhekiselele kwisakhiwo sayo kunye nolwalamano lwayo kunye nendawo esondeleyo.
Yintoni enokwenzeka ngeeNkqubo zoLwazi lweJografi, kunye nayo yonke imeko-bume yeenkqubo ezenzelwe uhlalutyo lomhlaba? Kwaye ngakumbi ngoku emva kokuseka ukuveliswa kwedatha ye-3D njengeyona nto iphambili, njengoko utshilo u-Erba, ukuba ezinye iingcali ezinxulumene nentsimi bonisa ukuba kukuphela kwedatha yevektha njengoko isaziwa, oko kukuthi, kunjalo "Ukuphela kwipolygoni" njengesiseko soqhagamshelwano lwenkcukacha edibene ne-cadastre", Oku kuthetha ukuba indlela efumaneka ngayo, eyakhiwe kwaye yahlaziywa kufuneka icatshangelwe.
Kuquka ngeso kunye data ngokulungisa 3D ayikho kude abakuso, izicelo ezifana ArcGIS Pro ESRI, DigitalTwins Bentley Systems abaye imisebenzi yabo yekhompyutha ngokubhekiselele kwezi data, QGIS iye kuquka add-ons ngenxa yokuphatha data mabala, ke ivelisa into engaziwayo malunga nokuza kwenzeka nge-GIS yesiqhelo kunye nezinye izicelo zohlalutyo lomhlaba, kuba uhlaziyo kufuneka luhambelane nophuhliso lwezobuchwephesha olusondeleyo, siza kubona kwiminyaka embalwa, ukuba kukho uhlengahlengiso lwesoftware yasimahla leyo vumela uluhlu olubanzi lwezinto ezisebenzayo zokwenza idatha ye-3D.
Umbuzo esifanele sizibuze wona kukuba, ukuba amazwe ethu esebenza ngokubambisana nokuqhubela phambili kwezobuchwepheshe, ukuphuhliswa kwe-SmartCities yinto ephakathi kwekona, kwaye ifuna inzame enkulu yokuhlanganiswa kwezobuchwepheshe, ukususela kwi-3D kwanobudlelwane kunye neenjini ezininzi ezikhoyo, kunye nombono we-IOT-Intanethi yezinto, kunye nokuhanjiswa kweedatha ngelifu, yinto eguqula idolophu kunye ne-cadastre, ithatha ukuba ibe izixeko ezinengqiqo kunye ne-cadastre ehlakaniphile.
Le webinar yayinomdla kakhulu, ingqwalasela ukubaluleka kwe-3D-BIM-model modeling kwi-sensors-cloud for geoengineering, kunye nabo bonke abafumana ukuphathwa kololu hlobo lwazi.
Kwelam icala, intlonipho yam ku-Diego Erba, ngokushumayela ngokungakhathali ngombono ongaphaya kwangoko. Into ongayithethiyo malunga nokufudumala kunye namandla athile okubonisa imixholo yokutshaya kwinguqulelo ebalaseleyo yabantu abafayo.
I-UNIGIS, ngaphaya kokuba nesibonelelo esingenakuthenjwa I-Master's Degree kwi-Intanethi yeeNdawo zoLwaziNgezi webinars uxhasa ukuyilwa koluntu olunomdla womxholo owongeza ixabiso kwicandelo. Nangona amanani ebanda, ama-95 aseColombia, ama-37 ama-Argentine, ama-35 aseMexico kunye nama-33 ase-Ecuadorian amele isibini kwisithathu sabathathi-nxaxheba bebonke kule webinar.
Ngaba awukwazi ukuya kwi #Webinar ye #UNIGIS kunye no-Diego Erba? Nantsi ikhonkco kunye nerekhodi elifutshane ukubona ukurekhodwa #: https://attendee.gotowebinar.com/register/7579969785221365507
Post Next ILeica Airborne CityMapper - isisombululo esinomdla kwimephu yedolophuOkulandelayo »